रुसी आफ्नो सेनाको शव किन लैजादैन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperरुसी आफ्नो सेनाको शव किन लैजादैन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
रुसी आफ्नो सेनाको शव किन लैजादैन ?
भिक्टोर भन्छन्, “यस्ता शव हजारौँ छन् । युद्ध अगाडिसम्म मौसम चिसो थियो तर अब हामी समस्यामा परेका छौँ किनकी रसी सेनाहरुले ती शव बेवारिस अवस्थामा छाड्दै हिँडिरहेका छन् । यसकारण अबका केही हप्तामै हामीले कसरी त्यो सब व्यवस्था गर्ने भनेर सोच्नै सकिरहेका छैनौँ । ”